HomeAfaan OromooFilannoo Itiyoophiyaa baatii Caamsaa bara 2021 gaggeeffama jedhamu keessaa dhiibamnee baafamne jechuun Kongireesiin Federaalistii Oromoo beeksise.
SQ | Bitootessa 4, 2021
Kongireesiin Federaalistii Oromoo filannoo marsaa jahaffaa Itiyoophiyaatti gaggeeffama jedhamee eegamu keessaa dhiibamnee baafamne jechuun ifatti filannoo sana irraa qooda akka hin fudhanne Bitootessa 3, 2021 ibsee jira.
Akka itti gaafatamaan waajjira Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Xurunaa Gamtaa jedhanitti dhaabni isaanii KFOn dhiibamee Filannoo biyyaalessaa marsaa jahaffaa gaggeeffama jedhame keessaa bahuuf akka dirqame beeksisaniiru.
Kongireesiin Federaalistii Oromoo ammaan dura ibsa baasaa tureen hoggantootni isaa hidhaman,waajjiraaleen isaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti cufamanii jiranis baramanii mariin dhugaan waliigaltee biyyoolessaa uumuurratti xiyyeeffate godhamee Filannootti akka galamuu gaafataa turuun ni yaadatama.
Marii Boordiin Filannoo Biyyoolessaa dhiyyeesse irratti hirmaachuu isaanii kan ibsan itti gaafatamaan waajjira KFO Obbo Xurunaa Gamtaa paartiin isaanii KFOn akka hin galmoofnee fi kadhimamaa akka hin galmeessines, galmeessuus kan dandeenyu dirreen siyaasaa yoo mijataa tahe waltajjiin walii galtee yoo uumame malee filannoo haqa qabeessa tahe gaggeessuun akka hin dandahamne odeeffannoo boordii filannoof kennineerra jechuun BBCtti himaniiru.
Akka Obbo Xurunaa Gamtaa BBCtti himanitti waajjira olaanaa isaanii irraa namoonni Filannoo kana qindeessuuf filatamanii turan shan keessaa afur hidhaa akka jiran eeruun afaan guuttadhee dubbachuu kanin dandahu Filannoo kana keessaa dhiibamnee bahuu keenya sabni keenyas hawaasni Addunyaa akka nuu beeku ibsuun fedha jechuun yaada isaanii fi kan paartii isaanii ibsaniiru.
Afgaaffii bitootessa 3/2021 BBC Afaan Oromoo irratti godhaniin paartiin tokko Filannoo irratti dorgomuufis tahe hojjechuuf bilisaan socho’uun isa barbaachisa kan jedha Obbo Xurunaa Gamtaa miseensonni KFO kan aanotaa Fi godinaalee adda addaa keessa jiran kan filannoo kana qindeessuu dandahan,kan taajjabdootallee filachuu dandahan mana hidhaa keessatti argamu Jechuun filannicha Keessaa fedhiin Osoo hin taane dhiibamanii Akka Keessaa bahan dubbataniiru.